Iindaba -Bhiyozela ngokufudumeleyo iprojekthi ye-DTS Nestlé Turkey iphumelele ngempumelelo uVavanyo loVavanyo loBushushu kwaNestlé
Ngokufudumeleyo bhiyozela ngokufudumeleyo iprojekthi ye-DTS Nestlé Turkey iphumelele ngempumelelo uVavanyo loVavanyo loBushushu lukaNestlé
Shandong Dingtaisheng Machinery Technology Co., Ltd., njengenkokeli kushishino ukutya nasiselo inzalo kushishino, uye wenza inkqubela eqhubekayo kunye ezintsha kwindlela eya phambili, kwaye iphumelele ukuqondwa ngamxhelo mnye kunye nokuthembela kubathengi ekhaya nakumazwe aphesheya.
Kufanelekile ukuba sikhankanye kwiiprojekthi ezininzi kulo nyaka i-DTS iphumelele iprojekthi yekofu ekulungeleyo ukuselwa ye-Nestlé Turkey inkampani ye-OEM, inikezela iseti epheleleyo yezixhobo zamanzi okutshiza ukujikeleza inzalo, kunye nokufaka umatshini wokugcwalisa i-GEA e-Italiya Krones eJamani Ngeli xesha, ukusuka kwimveliso kunye nokulungiswa, ukuya kwi-FAT, ukufakela kunye nokugunyazisa ngexesha elinye; "unamandla okholisayo", iqela le-DTS iimfuno ezingqongqo kumgangatho wezixhobo, izisombululo ezingqongqo nezicokisekileyo zobugcisa, zaphumelela umthengi wokugqibela, eUnited States Indumiso yeengcali zeNestlé kunye nabasebenzi bezatifikethi benkampani yesithathu eMzantsi Melika. Emva kweentsuku ezilishumi zokusebenzisana intsebenziswano, ulwabiwo lobushushu lwe-DTS sterilizer kwisimo esimileyo nesijikelezayo sikulungele ngokupheleleyo, kwaye siphumelele ngempumelelo isiqinisekiso esingqongqo sobushushu sikaNestlé.
Yintoni ukuqinisekiswa kwe-thermal? Kutheni le nto ukuqinisekiswa kwe-thermal kuxabiseke kakhulu ngabathengi abaphezulu? Zeziphi izibonelelo i-DTS ekufuneka ikulungele kulo msebenzi?
Ukuqinisekiswa kobushushu, oko kukuthi, xa usenza unyango lobushushu kwimveliso, qinisekisa ukuba ubushushu benxalenye nganye yezixhobo zokucoca ubushushu buyafana kwaye buyahambelana ngexesha lobushushu kwinkqubo yoxinzelelo, kwaye emva koko uqinisekise ukuba inkqubo yoxinzelelo inokuthi ifezekise ukhuseleko lokutya, ngaloo ndlela yokwandisa inkqubo yokuphucula umgangatho wemveliso kunye nokunciphisa ixesha lenkqubo. Kwicala leziselo ezizalisiweyo, kuphela inzalo efanelekileyo nefanelekileyo enokutshabalalisa okanye ibulale ii-enzymes kunye ne-microorganisms kwisiselo ngokwaso, kwaye iqinisekise ukuba iimveliso ziyahlangabezana neemfuno zokungabinakho ukuzala. Ke ngoko, ukuqinisekiswa kwe-thermal yenye yezinto eziphambili zokuqinisekisa ukhuseleko lwemveliso, kwaye yenye yeemfuno ezibalulekileyo ze-US FDA yabenzi bokutya neziselo. Nangona kunjalo, akukho mgangatho ofanayo wovavanyo lokuqinisekisa ubushushu lwezixhobo zokucoca ubushushu ekhaya nakumazwe aphesheya, kodwa iimfuno zikaNestle zingqongqo kakhulu. Kuphela ngabavelisi bezinto ezisemgangathweni ophezulu, ukusebenza okuthembekileyo kunye nenkqubo yesandi enokuthi ibandakanywe kuluhlu lwabo baboneleli. Esi sisiseko se-DTS ukuze siphile, sikhule kwaye siphumelele.
I-DTS ineqela lobuchwephesha, eliselula nelinamandla eR & D, "isiphelo esiphezulu, ukuchaneka, inotshi ephezulu" izixhobo zokulungisa, zifuna utshintsho kuphononongo, zenze utshintsho kutshintsho. Ndiyakholelwa ekubeni i-DTS izakuqhubela phambili kwaye ikwenze ubomi obungcono.